पुरानो सोसल सेक्युरिटी कार्ड च्यातियो वा नष्ट भयो ? नयाँ कार्ड अनलाइनबाटै निशुल्क « Khasokhas
तपाईको सोसल सेक्युरिटी कार्ड च्यातियो वा नष्ट भयो ? तपाईले नयाँ कार्ड अनलाइनबाटै निशुल्क आवेदन दिएर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । तर त्यसका लागि तपाईले केही मापदण्डहरु भने पूरा गरेको हुनुपर्छ ।
यदि तपाई १८ बर्षभन्दा माथिको अमेरिकी नागरिक हुनुहुन्छ भनेमात्र तपाईले पुरानो कार्डको सट्टामा उही नम्बरको नयाँ कार्ड अनलाइनमार्फत आवेदन दिएर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । तर तपाईले अनलाइनमार्फत आवेदन दिएर कार्डमा नाम परिवर्तन गर्न भने सक्नुहुन्न ।
साथै तपाईसँग अलास्का, डेलावर र विसकन्सिनबाहेक अन्य कुनै राज्यको परिचयपत्र हुन आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै मिनेसोटा, नेभाडा, न्यु ह्याम्पशायर, ओक्लोहोमा र वेष्ट भर्जिनिया निवासीहरुका लागि पनि अनलाइनमार्फत पुरानो कार्डको साटो उही नम्बरको नयाँ कार्ड प्राप्त गर्न सकिनेछैन ।
अनलाइनमार्फत पुरानो कार्डको साटो नयाँ कार्डका लागि आवेदन दिन तपाईले अनलाइनमा एकाउन्ट बनाउन जरुरी हुन्छ । यदि तपाईसँग माइ सोसल सेक्युरिटी एकाउन्ट छ भने तपाईले त्यही युजर आईडी र पासवर्डमार्फत लगइन गरेर पुरानो कार्डको साटो नयाँ कार्डका लागि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ ।
अनलाइनमार्फत एकाउन्ट खोल्न वा लगइन गर्नका लागि यहाँ क्लीक गर्नुहोला ।
लगइन गरिसकेपछि तपाईले ‘रिप्लेस योर सोसल सेक्युरिटी कार्ड’ विकल्प देख्नुहुनेछ । त्यसमा क्लीक गरिसकेपछि तपाईले अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्नुहुनेछ ।
अनलाइन आवेदनका लागि योग्य नभएमा
यदि तपाई अमेरिकन नागरिक हुनुहुन्न भने वा अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्नुभएन भने हुलाकमार्फत आवेदन पठाएर वा स्थानीय सोसल सेक्युरिटी कार्ड सेन्टरमा गएर आवेदन दिन सक्नुहुनेछ । हुलाकमार्फत आवेदन पठाउँदा तपाईले फर्ममा साथमा उपयुक्त परिचयपत्रको ओरिजिनल पठाउनुपर्छ ।
कुन अध्यागमन स्टाटसमा रहेको व्यक्तिले कस्ता कागजात पेश गर्ने थाहा पाउन यहाँ क्लीक गर्नुहोला ।
तपाईसँग उपयुक्त डकुमेन्ट छ भने तपाईले फर्म डाउनलोड गरेर भर्न सक्नुहुनेछ ।
फर्म डाउनलोड गर्नका लागि यहाँ क्लीक गर्नुहोस् ।
त्यसपछि फर्म भरेर हस्ताक्षर गरी कागजातसहित एउटा खाममा हाल्नुहोला । अनि हुलाकमार्फत पठाउनुहोला वा सोसल सेक्युरिटी कार्ड सेन्टरमा ड्रपबक्समा लगेर खसाल्नुहोला । कोरोनाको महामारीका कारण कैयन स्थानीय सोसल सेक्युरिटी कार्ड सेन्टरहरुमा ड्रपबक्सको व्यवस्था गरिएको छ ।
तपाईले ग्रिनकार्ड प्राप्त गरिसकेपछि वा अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि आफ्नो अध्यागमन अवस्थाबारे अपडेट गराउनका लागि हुलाकमार्फत वा ड्रपबक्समार्फत आवेदन पठाउन सक्नुहुनेछ । हुलाक वा ड्रपबक्सबाट पठाउँदा आफ्नो पूरा नाम, पूरा ठेगाना र फोन नम्बर खाममा समेत लेख्न नबिर्सनुहोला ।
तपाई न्युयोर्कमा बस्नुहुन्छ र कोरोनाको महामारीका कारण सोसल सेक्युरिटी कार्डबारे कुनै सुविधा लिनका लागि अलमलमा पर्नुभएको छ भने क्वीन्स सोसल सेक्युरिटी कार्ड सेन्टर जमैकामा ८८८ २८१ २४७१ नम्बरमा फोन गरेर अप्वाइन्टमेन्ट लिन वा उचित जानकारी लिन सक्नुहुनेछ ।
आगामी साता अमेरिकाको प्रतिनिधिसभामा दुईवटा अध्यागमनबारेका बिलमा मतदान हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाका डेमोक्रेटिक नेता
अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालय कन्सुलर अफेयर्सका कार्यवाहक डेपुटी एसिस्टेण्ट सेक्रेटरी जुली एम स्टफ्टले डिभी लोटरी
भिसा सकिएका डिभी विजेताको स्टीकर नविकरण नहुने, एक्सपायर भिसामै तुरुन्त अमेरिका आउन सुझाव
भिसाको अवधि सकिइसकेका २०२० का डिभी विजेताहरुका लागि उक्त भिसाको सट्टामा नयाँ भिसा स्टीकर जारी
अमेरिकामा ९ प्रकारका अध्यागमन ठगी
अमेरिकी सरकारले अध्यागमनबारेका नियमहरु फेरबदल गरिरहँदा ठगहरुले त्यसैको दुरुपयोग गरेर आप्रवासीहरुलाई ठग्ने क्रम पनि तीब्र